In ka badan 100-Tahriibayaal Soomaali ah oo lagu xiray wadanka Suudaan kuwaas oo laga badbaadiyay Rafaad!! | kowtharmedia.com
Home WARAR In ka badan 100-Tahriibayaal Soomaali ah oo lagu xiray wadanka Suudaan kuwaas oo laga badbaadiyay Rafaad!!
In ka badan 100-Tahriibayaal Soomaali ah oo lagu xiray wadanka Suudaan kuwaas oo laga badbaadiyay Rafaad!!
Jan 10, 2017WARAR
Ciidanka ammaanka Xuduudaha ee wadanka Suudaan ayaa xiray 115-ruux oo Muhaajiriin ah kuwaasi oo u kala dhashay wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya sida ay sheegeen saraakiisha wadankaas.
Dadkaan ayaa waxaa laga qabtay dhulka Saxaraha ah ee u dhaxeeya labada wadan xili ay doonayeen inay gaaraan dalka Liibiya si ay ugu sii gudbaan Qaarada Yurub.
Cisaamadiin Saalix oo ah Sargaal ka tirsan ciidanka Suudaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 101-Qof oo ka mid ah dadka la qabtay ay yihiin Soomaali, waxaana sidoo kale ka mid ah dadkaasi 34-Dumar ah, halka 14-ka kale ay yihiin Itoobiyaan.
Saraakiisha dowladda Suudaan ayaa sidoo kale sheegay in dadkaan la xiray ay yihiin dhamaantood dad dhalinyaro ah oo da’doodu u dhaxeyo 18-sano jirilaa 25-sano jir.
“Waxaan ka soo baxnay Soomaaliya, markaan gaarnay Suudaan, waxaan isku dhiibnay kooxo ka shaqeeya Tahriibka, waxay na dajiyeen Guri ku yaala magaalada khartuum, ka dibna waxay noo keeneen Gawaari kuwaas oo aan Saxaraha Liibiya ku gaarnay Todobo maalmood, laakiin hadafkeena wali ma aanan gaarin.” Sidaa waxaa u sheegay Wakaaladda AFP Maxamed Mahdi Madar.
Ilaa iyo 5,000 oo ah Tahriibayaal Afrikaan ah ayaa ku geeriyooday Xeebaha dalka Liibiya iyo Dhulka Saxaraha ah ah sanadkii ugu danbeeyay ee 2016-ka sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Xigasho MUQDISHO (SONNA)
Previous PostCadaado: Abshir Bukhaari Oo Iskuul U Furay arday Barakacayaal Waxbarasho La’aan Ah January 10, 2017! Next PostWar deg deg ah: C/kariin Guuleed oo xaalad deg deg ah ku soo rogay degaanada Galmudug Akhriso!!